प्रिन्ट संस्करण - पेट दुख्ने रोग - कोपिला - कान्तिपुर समाचार
पेट दुख्ने रोग
वैशाख ३, २०७४-एघार बजेको थियो । अफिसमा कामको चाप त्यति थिएन । केही स्टाफहरू जम्मा भएर गफिँदै थिए । त्यतिकैमा उपासनाकी आमालाई भने स्कुलबाट फोन आयो । उपासना पेट दुखेर रोइरहेकी छन् भन्ने खबर पाएर उहाँ निकै आत्तिनुभयो । बिदा माग्दा हाकिमले आनाकानी गरे । बल्लतल्ल आधा दिनको बिदा मिलाएर उहाँ हतारहतार स्कुल पुग्नुभयो । बिहान घरबाट निस्कँदासम्म त उनी ठिकै थिइन्, अचानक के भयो होला ? गेटमा कुरुन्जेल पनि धुवाँ, धुलो र प्रदूषणका कारण कुनै किसिमको भाइरल संक्रमण पो भयो कि भन्ने आशंकाले उहाँ निकै पिरोलिनुभयो ।
केही बेरमा रुँदै गरेकी उपासनालाई गेटसम्म ल्याइदिएर उनकी कक्षा शिक्षिकाले भन्नुभयो, ‘यो समेत तीनपटक भयो उपासनाको पेट दुखेको, कृपया डाक्टरकहाँ लैजानुहोला ।’ आमा स्वीकृति जनाउँदै उपासनाको हात समातेर गेटबाहिर निस्कनुभयो । गेट कट्नासाथ उपासना आँसु पुछेर मुसुक्क हाँसिन् । अघिल्ला दुईपटक पनि उनलाई ठीक यही समयमा पेट दुखेको थियो । आमाका मनमा केके कुरा खेले । उहाँले एकपटक सरसर्ती उपासनालाई नियालेर हेर्नुभयो ।
बिहान उपासना आफ्नो स्कुलको डायरीमा नोट लेखाइमाग्न आमाकहाँ गएकी थिइन् । पेट दुखेकाले गणितको गृहकार्य गर्न नसकेको भन्ने व्यहोराको नोट लेखिदिनू भन्ने उनको आग्रह थियो । आमा भान्सामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाबाकहाँ जाऊ छोरी ।’ उपासना डायरी बोकेर अँध्यारो मुख लगाउँदै निस्किएकी थिइन् । सायद बाबाले नोट लेखिदिन भ्याउनु भएन ।
उनलाई गृहकार्य गर्ने बेला कहाँ पेट दुखेको थियो र ? बेलुकी खाना पनि राम्रैसँग खाएकी हुन् । आफू भान्साको काम सिध्याएर आउँदा पनि टेलिभिजनको अघिल्तिर कार्टुन हेर्दै बसिरहेकी उपासनालाई जबरजस्ती बोकेर उहाँले नै ओछयानसम्म पुर्‍याउनुभएको थियो । बिहान पनि उनी अबेर उठिन् । फेरि उठ्नासाथ बाबाको मोबाइलमा खेल्न थालिन् । आमालाई याद आयो, ‘उनले त किताब, कापी झोलाबाट झिकेकै थिइनन् ।’ ‘अब कुन विषयको कक्षा थियो नि ?’ आमाले सोध्नुभयो ।
‘म्याथ,’ उनले दुवै हातले पेट थिच्दै भनिन् ।
उपासनाको जवाफले आमाको मन खिन्न भयो । उहाँको अनुहार चिन्तित देखियो । रोग पत्ता लागिसकेकोले डाक्टरकहाँ जानु पनि आवश्यक थिएन । छोरी डोर्‍याएर उहाँ सरासर घर फर्किनुभयो ।
आमाले दिएको एक गिलास कागती पानी सिध्याउनासाथ उपासना रिमोट खोज्न थालिन् । आमा भने उनको स्कुल ब्याग खोतल्न थाल्नुभयो ।
उनको स्कुलको डायरीमा विषय शिक्षकले अभिभावकका लागि लेखेका केही नोटहरू थिए, जसमा उपासनाले गृहकार्य नगरी आउने गरेको, उनले किताब नल्याएको, उनको कापी हराएको, फोहोरी अक्षर लेखेको आदिइत्यादि गुनासाले भरिएका थिए । दुइटा आफूहरूले लेखिदिएका नोट पनि थिए, जसमा उपासनालाई सन्चो नभएकाले गृहकार्य गर्न सकिनन् भन्ने व्यहोरा थियो तर ६ महिनायता उपासना गृहकार्य नै गर्न नसक्ने गरी कहिल्यै बिरामी परेकी थिइनन् ।
उपासनाले हरायो भनेको गणितको किताब बुक–र्‍याकको च्यापमा भेटियो । आमाले उनको किताब देखाउँदा पनि उपासनाले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् । टेलिभिजनमा उनको मनपर्ने कार्टुन आइरहेको थियो । त्यसका मुख्य पात्रको संवाद नक्कल गर्दै उनी रमाइरहेकी थिइन् तर आमाको मन रमाउन सकेन । उहाँका आँखामा पश्चात्ताप भरिएको थियो ।
अफिसबाट फर्किएपछि हुने शारीरिक थकान र भान्साको कामको चापले गर्दा उहाँले छोरीलाई समय दिन सकिरहनुभएको थिएन । बाबा पनि साँझ थाकेर फर्किनुहुन्थ्यो । आराम गरिरहेका बेला झर्को नलगाओस् भनेर पहिले पहिले आफैंले टेलिभिजन हेर्न दिने गर्नुभएको थियो । तर, पछि उनलाई बानी नै पर्‍यो । नेटबाट गेम डाउनलोड गरेर खेल्न पनि उनलाई आउँथ्यो । ल्यापटप नभए मोबाइल र मोबाइल नभए टीभी उनलाई चाहिन्थ्यो । बाबाको समाचार हेर्ने बेलामा पनि उनी रिमोट च्यापेर कार्टुन हेरिरहेकी हुन्थिन् । केही भन्यो कि रुने, चिच्याउने, झगडा गर्ने उनको बानी बढ्दै गएकाले बाबाआमा दुवै आजित हुनुभएको थियो । उनलाई चुप लगाउने माध्यम नै मोबाइल वा टेलिभिजन भएको थियो । उनी यिनीहरूसँग यति नजिकिँदै गएकी थिइन् कि किताबसँग उनको दूरी बढ्दै गएको कसैलाई पत्तै भएन ।
यति ठूली भएर पनि उपासनालाई अझै आमाले खुवाइदिनुपथ्र्यो । आमाले खुवाइदिँदा होस् वा कपाल कोरिदिँदा उनका आँखाचाहिँ सधैं टेलिभिजनमै टाँसिएका हुन्थे । उनको पढाइ भने खस्कँदै गएको थियो । सामान्य जोड घटाउ गर्न पनि उनले बिर्सिसकेकी थिइन् । घरमा कुनै किसिमको नियम थिएन ।
साँझ घर फर्किएपछि आमाले सबै कुरा बाबालाई पनि सुनाउनुभयो । बाबाको अनुहारमा केही रिस देखियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘झापड लाउन नपुगेको ?’
‘झापड लाउन नपुगेको कि समय दिन नपुगेको ?’ आमाले बाबातिर प्रश्नसहित हेर्नुभयो । बाबासँग कुनै जवाफ थिएन । लामो छलफलपछि उपासनाको पढ्ने, खेल्ने र टेलिभिजन हेर्ने समयको एउटा तालिका बन्यो । त्यसमा बाबाआमाको पनि उत्तिकै सहभागिता थियो ।
स्कुलबाट फर्किएपछि उपासना आधा घण्टा टेलिभिजन हेर्थिन् अनि आमासँग बसेर आफ्नो गृहकार्य सकाउँथिन् । बाबा नफर्किउन्जेल आमाले उनलाई राम्राराम्रा कथा पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो । बाबा आएपछि उनी बाबासँग ल्यापटप हेर्थिन् । बाबाले नेटमा खोजेर उनका लागि रमाइला गेम पनि डाउनलोड गरिदिनुभयो । त्यसमा त खेल्दा खेल्दै हिसाब गर्न, गीत गाउन र अंग्रेजी पनि सिक्न सकिन्थ्यो ।
उनले बिहान बिहान बाबासँग व्यायाम गर्न र आमासँग कम्मरमा रिङ घुमाउन पनि सिकिन् । नियममा चल्न थालेपछि उनका किताब कापी कहिल्यै हराएनन् । उनलाई स्कुलमा पेट दुख्न पनि छाड्यो । उनको डायरीमा शिक्षकका गुनासा भरिएका नोट पनि आएनन् ।
त्रैमासिक परीक्षापछि रिजल्ट लिन जाँदा बुबाआमाको उज्यालो अनुहार देखेर उपासना पनि खुसी भइन् ।
प्रकाशित: वैशाख ३, २०७४
कांग्रेसका मधेसी नेताले भने—‘संशोधनपछि मात्रै चुनाव’ ›
चुनाव आयोमंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
बुइँगलको भूत मंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
ओभर एन्ड अन्डर थ्रोमंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
नेपालको विशेषतामंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
किताबमंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
खोलामंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
परीक्षाको तयारीमंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
जिज्ञासामंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
मनपर्छ, मनपर्दैनकार्तिक २६, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
काग र हाँसकार्तिक २६, २०७४पूरा पढ्नुहोस्